Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny Uganda Airlines dia miantoka ny laharam-pahamehana fiantsonana voalohany any London Heathrow
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK • Vaovao Mafana Uruguay • Vaovao isan-karazany
Ny kaompaniam-pitaterana Oganda dia miantoka ny lohan-tsoroka voalohany ao London Heathrow
Ny làlana voalohany natokana ho an'ny Uganda Airlines miaraka amin'ny A330 dia London, Dubai, Guangzhou ary Mumbai
Hanolotra fiaingan'ny alina amin'ny sidina London any ivelany ny kaompaniam-pitaterana raha toa kosa ny sidina miverina dia hiainga ny Heathrow ny marainan'ny andro
Hanomboka serivisy any Lusaka sy Johannesburg ny mpitatitra
Ireo slot dia manokana amin'ny fandaharam-potoana fahavaratra 2021 manomboka amin'ny 28 martsa
Oganda Airlines dia hanomboka hetsika iraisam-pirenena ho any Eropa, Azia ary Moyen Orient aorian'ny famitana ny fizotry ny fanamarinana fiaramanidina A320-800 Neo miaraka amin'ny Fahefana Aviation sivily ao Oganda.
Fandaharam-potoana dimy ity izay, raha vantany vao vita, dia hiafara amin'ny fanampiana ny fiaramanidina ho an'ny Uganda Airlines Air Operator Certificate (AOC).
Mbola voafaritra ihany ny kaompaniam-pitaterana na eo aza ny fatiantoka UGX 102billion (USD27.8 Tapitrisa) fatiantoka tamin'ny taom-piantohana 2019/20, satria tsy nahatanteraka ny drafi-pandraharahany mifanaraka amin'ny fandaharam-potoana nomanina momba ny fanidiana manerantany natao hanalefahana ny fiparitahana an'ny COVID-19.
Ny zotra voalohany natao ho an'ny A330 dia ny London, Dubai, Guangzhou ary Mumbai, miaraka amin'ny zotram-piaramanidina miasa sidina mivantana mankany amin'ireto mpivady tanàna ireto avy ao amin'ny Entebbe International Airport, miaraka amin'ny sidina dimy isan-kerinandro mankany London ary enina mankany Dubai, hoy ny tompon'andraikitra amin'ny kaompaniam-pitaterana. Hanolotra fiaingan'ny alina amin'ny zotra London any ivelany ny kaompaniam-pitaterana raha toa ka hiala any London ny sidina miverina Heathrow atoandro maraina. Hanomboka serivisy any Lusaka sy Johannesburg ny mpitatitra ka hitondra ny tamba-jotra isam-paritra amin'ny toerana 11.
Roger Wamara, ny Tale, Marketing kosa dia nilaza fa ny isan'ny sidina dia ho faritana mandritra ny famerenenana ny orinasa. Nanampy izy fa 'Nanao fangatahana tamin'ireo slot ireo izahay talohan'ny nanaparitahan'ny areti-mandoza COVID-19 ny tsena. Tokony hijery ireo isa indray isika izao alohan'ny hanapahana hevitra ny fomba hiasa '.
Mandritra izany fotoana izany ny fizotran'ny fahazoana ny zon'ny fifamoivoizana, ny fahazoan-dàlana ataon'ny mpandraharaha an'habakabaka vahiny ary ny fankatoavana ny fipetrahana any amin'ny toerana kendrena dia mandroso tsara Hatreto dia nahomby ny zotram-piaramanidina tamin'ny alàlan'ny seranam-piaramanidina London Heathrow Airport (LHR) any United Kingdom sy Dubai International Airport (DXB) any amin'ny Emira Arabo Mitambatra.
Ny slots dia miavaka amin'ny fandaharam-potoana fahavaratra 2021 manomboka amin'ny 28 martsa, saingy nilaza Andriamatoa Wamara fa ny daty fanombohana dia aorian'ny fametrahan'ny UK famerana ny dia tsy ilaina, ary ny hafaingan'ny fanamarinana ny fiaramanidina A330-800 an'ny fiaramanidina. Fahefana Aviation Civile Uganda. Ny dingana dia misy dingana dimy ary Oganda Airlines dia amin'ny dingana fahatelo.
Raha ny fanazavan'i Vianney Lugya, mpitantana ny fifandraisana amin'ny daholobe ao amin'ny Ovilan'ny Aviation Civile Uganda, dia mila manavao ny taratasy fanamarinana ny Air Operations ilay mpitatitra mba hampidirina ao anatin'io fiaramanidina vaovao io satria izy io dia nahazo alalana tamin'ny voalohany raha tsy ny Mitsubishi CRJ's ihany no nampandeha azy.
“Ny fiaramanidina dia mbola tsy voamarin'ny mpandrindra fa manantena izahay fa hahavita izany dingana izany amin'ny faran'ny volana aprily. Raha miala sasatra ny fameperana amin'ny dia ny UK dia tokony ho vonona ny handefa an'i Londres isika amin'ny Mey, "hoy Andriamatoa Wamara.